मास्टिफ: यस नस्लको विशेषता र हेरचाह जान्नुहोस् | विश्व कुकुरहरु
यो नस्ल यसको मालिकहरूप्रति बहादुर र मायालु योग्यताको लागि अद्वितीय मानिन्छ, गार्ड कुकुरको रूपमा धेरै राम्रो भएकोले, त्यसैले यो छ ठूला सम्पदा भण्डार गर्न प्रयोग गरियो। यसको उपयोगिता यस तथ्यबाट उत्पन्न हुन्छ कि यो कुकुरको रूपमा सिफारिस गरिएको छ यसको गुणका कारण कम्पनी राख्नु हो।
शताब्दीहरूमा, मास्तिफ भेडाको बगालसँगै आएको छ ब्वाँसोको आक्रमणबाट गाईवस्तुको रक्षा गर्दै। के तपाईं यस जातको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ? त्यसो भए यस मुद्दासँग सम्बन्धित सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरूको बारेमा पत्ता लगाउन यो लेख पढिरहनुहोस्।
हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, यसको कार्य विशुद्ध सुरक्षात्मक छ। यो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ यो अवस्थित छ त्यसमा निर्भर अन्य नामबाट पनि चिनिन्छ, ती मध्ये एक गाई कुकुर हो।
यो चाखलाग्दो कुरा हो कि तपाईंलाई यस महान दौडको ईतिहासको बारेमा केहि थाहा छ र त्यो त्यो हो १ 1981 XNUMX१ मा स्पेनिश एसोसिएशन अफ द स्पेनिश मास्टिफ कुकुर.
यो संघ एक संगठित विचार थियो यस नस्लका बारे जानकारी संकलन गर्न कार्यक्रम पुरानो समयमा यसैले उसले पुरानो गाई कुकुरलाई सान्दर्भिक र सान्दर्भिक जानकारी पुनः प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नयाँ ढाँचा बनायो।
तिनीहरूसँग विशेषताहरू छन् जसले तिनीहरूलाई परिभाषित गर्दछ र तिनीहरूलाई पहिचान दिन्छ, त्यो हो तिनीहरू दुलहीहरू हुन् जुन दुबै घरपालुवा जनावर र गार्ड कुकुरहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हामी तल केहि गुण र विशेषताहरु लाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछौं जसले यसलाई वास्तवमै आकर्षक बनाउँदछ:
यो ठूलो कुकुर हो, वास्तवमै बलियो, धेरै शक्तिशाली र धेरै मांसपेशिहरूको साथ विशेषता हो। यो यस बारे भनिएको छ यो स्पेनमा देखिने सबैभन्दा ठूलो प्रजाति हो।
यो एक धेरै अविश्वसनीय दौड हो, अपरिचितहरूको अगाडि ठूलो दृढता र आफूलाई धेरै पक्का। यसको भुँडा बाक्लो हो र यसले एक प्रकारको ऊन कपाल पाएको छ जसले अण्डरकोट देखा पर्छ, जुन गर्मीमा हराउँछ।
तिनीहरूको रंग को रूप मा, सेतो, कालो र brindle अधिक सामान्य छन्। तिनीहरूको लम्बाई male० र cm० सेन्टीमिटर हुन्छ चाहे त्यो पुरुष वा महिला हो। 40० र kil० किलो बीचको तौल हो यद्यपि तिनीहरू सम्भवतः 90 ० किलोसम्म पुग्न सक्दछन्।
तिनीहरू प्राय जसो पशुधनको साथसाथै खेतहरू र सम्पत्तीहरूको पनि हेरचाह गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामान्य जस्तो, तिनीहरू धेरै सन्तुलित छन्, जसले तिनीहरूलाई राम्रो साथी कुकुरको रूपमा चित्रण गर्छ। औसत आयु eight देखि १० बर्ष बीच हो र वातावरणको बारेमा यो भन्न सकिन्छ कि यो परिवारमा धेरै राम्रो फिट हुन्छ, ग्रामीण वातावरणमा, चरन र / वा निगरानीमा।
यो उनीको बारेमा भन्न सकिन्छ कि ऊ स्पेनको सबैभन्दा ठूलो प्रजाति मध्ये एक हो। त्यहाँ यसको उत्पत्ति र प्रोभेन्सन्स को रूप मा शंका छ, तर त्यहाँ ऐतिहासिक डाटा छन् जुन वास्तविकताको नजिक छ; फोनिसियनहरू र सेल्टहरूको माध्यमबाट देश आए र तिनीहरूलाई रोमीहरूले लडाई कुकुरको रूपमा प्रयोग गरे।
यसमा कुनै श is्का छैन कि मध्य युगमा तिनीहरूको उपयोगिता बगालको अभिभावकको रूपमा केन्द्रित थियो। सामान्यतया, यसको विशेषताहरू एक हो धेरै चपल, बलियो, र बथानहरूलाई रक्षा गर्न सक्षम प्रजाति अन्य जनावरहरूबाट यदि तपाईं खतरा महसुस गर्नुहुन्छ।
स्पेनिश मास्टिफ कुकुर बलियो, ठुलो र मिठो छ। यसको खुट्टा फुर्तिलो, भारी र बलियो छ। यसको एक धेरै ठुलो टाउको, कान झर्ने छ, र यसको अनुहारको छाला आँखा र गालामा झुण्डिएको छ।
सम्पूर्ण शरीर धेरै बाक्लो कपालले ढाकिएको हुन्छ। रंगको रूपमा, सबै भन्दा सामान्य हो ठोस रंग र brindle.
यसको मर्मतसम्भार गर्न सजिलो छ र धेरै व्यायाम आवश्यक छ, त्यसैले यो ठूलो घर मा बस्न सल्लाह छ। व्यायाम को अभावका कारण उसको चिन्तालाई बेवास्ता नगर्नुहोस्।
फोहोर सबै फोहोर र मृत कपाल हटाउन सिफारिस गरिएको छ। फ्लाई र टिकको लागि प्रत्येक आउटिंग पछि जाँच गर्नुहोस् र जब तपाईं उसलाई नुहाउनु हुन्छ उसको कानको ख्याल राख्नुहोस्।
मजबूत आकारको एक जातको रूपमा, यसले हिप डिसप्लासिया जस्ता रोगहरूको लागि हेर्छ। तपाईंले सन्तुलित आहार खानुपर्दछराम्रो पाचनका लागि आवश्यक पोषक तत्वहरूको साथ; उसको खोपको ख्याल राख्नुहोस् र उनी नियमित रूपमा पशु चिकित्सकमा उपस्थित हुन्छन्।
तपाईंले विशेषज्ञले सिफारिस गरेको हदसम्म यसको कीरा बनाउनु पर्छ। परजीवीहरूले तपाईंको शरीरको भागमा फीड गर्दछ, प्रत्यक्ष चोटपटकहरू निम्त्याउँछ जसले पखाला, वजन घटाउन, बान्ता र पनि निम्त्याउन सक्छ आन्द्रा ट्यूब रोक्न सकिन्छ।
तपाईंले मात्र एक सही र खातामा लिनु पर्छ पर्याप्त डिउर्मि। विशेष गरी घरपालुवा जनावरहरूको लागि बनाईएको औषधिहरूको साथ।
यस नस्ललाई यसको ठूलो आकारको कारण केही हदसम्म क्यालोरिक सेवन आवश्यक पर्दछ, साथै व्यायामको रूपमा यसको बलियो आकारमा अन्तर्निहित, त्यसैले यसको मर्मत प्राथमिकता हो र सबै सटीक सिफारिशहरूको पालना गर्नुपर्दछ।
यो अझै पपी हो कि होइन भन्नेमा निर्भर गर्दछ, यसको सिफारिश गरिन्छ कि यसको खाना खान्नुहोस् सानो अंश र फरक समयमा दिनको कम्तिमा तीन पटक, र जब जनावर चाहान्छ, उसले उसलाई खाना खाने बानीमा अनुशासनमा राख्नुपर्दैन।
त्यस्तै र सुझावहरू भित्र यो राम्रो छ कि तपाइँ एन्टिऑक्सिडन्टहरू खान्नुहुन्छको कोटलाई राम्रो स्थितिमा राख्नको लागि तिनीहरू आवश्यक छन्। त्यस्तै प्रकारले, उसलाई ती सबै प्रोटिनहरू र खाद्य पदार्थहरू प्रदान गर्दछ जसले उसको जोर्नीहरू बचाउँछ।
जस्तै उनीहरूलाई मोटोपनाको समस्या छ, तपाईंले तिनीहरूको वजन र कुनै पनि अन्य खाद्य असंतुलन हेर्नु पर्छ। विशेषज्ञसँगको परामर्शको पनि निरीक्षण गर्नुहोस्, उसले तपाईंलाई राम्रो अभिमुखीकरण दिनेछ कसरी मास्टिफ विकसित हुँदैछ.
यो व्यायाम वा खाना पछाडि हिंड्नको लागि सोच्नुहोस् को लागी सोच्नुहोस्, यो ठीक पाचन को लागी ठीक घण्टा प्रतीक्षा गर्न सल्लाह दिइन्छ, अन्यथा यसले समस्या पैदा गर्न सक्छ।
दिनको कम्तिमा धेरै चोटि हिंड्नको लागि तपाईंले यसलाई लिनु पर्छ, तपाईंको स्वास्थ्य र शारीरिक कल्याणको लागि हो। म तपाईलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि यसको साथ तपाईले आफ्नो कुकुरको तौल र राम्रो पाचन नियन्त्रण गर्नुहुनेछ।
परजीवीहरूबाट उसलाई जोगाउनुहोस्, तपाईंको पशुचिकित्सकको साथ खोप तालिका स्थापना गर्नुहोस्। यस जातलाई धेरै ध्यान चाहिन्छ, एक्लो महसुस गर्नु वा मायाको प्रस्ताव राख्नु पर्दैन यसले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन र मनोवैज्ञानिक समस्या निम्त्याउन सक्छ।
यस मुद्दामा प्रस्तुत गरिएको स्वास्थ्य समस्या मध्ये एक हो हिप डिस्प्लेसिया, जुन तपाइँलाई केहि दुखाइ हुन सक्छ र तपाइँ पनि लंगडा हुन सक्छ। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाईं यसलाई व्यायाम, खेलकुद, खाद्यान्न र हिडनबाट कम गर्न सक्नुहुन्छ।
पेट मुड्ने समस्याहरूको लागि बाहिर हेर्नुहोस्। यदि तपाईं ध्यान दिनुहुन्छ कि खानाको सेवन दिनको धेरै भाग साना भागहरूमा छ भने, तपाईं तिनीहरूको स्वास्थ्य र कल्याणलाई जाँचमा राख्नुहुनेछ।
त्यसैले स्प्यानिश मास्टिफ यो एक ठूलो, बलियो कुकुर हो, यसको मालिकलाई धेरै विश्वासी र बच्चाहरु संग धेरै मायालु।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुर जात » मास्टिफ